News – Page 10 – Brighter Future Myanmar Foundation
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးအသင်းမှ ချီးမြှင့်သော အမျိုးသမီးထူးချွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဂုဏ်ပြုဆုကို ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း(BFM) ဥက္ကဌ ဒေါ်နန်းလိုင်းခမ်း လက်ခံရရှိ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးအသင်းမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ၊ ပညာရည် ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄)ရက်နေ့က ရန်ကုန် မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘောဇသာသနာ့ဗိမာန်တွင် ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို့ အသက်(၇၅)နှစ် အထက် ကန်တော့ခံသက်ကြီးဘိုးဘွားများ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ တွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ဲကြသော အသင်းဝင်သားသမီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည် တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းရှိ ထူးချွန်သူများအား ဂုဏ်ပြုဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးထူးချွန်ဆုကို ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါ်စဝ်သီတာထွေးက ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း(BFM) ဥက္ကဌ ဒေါ်နန်းလိုင်းခမ်းကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ရာ ဒေါ်နန်းလိုင်းခမ်း ကိုယ်စား BFM...
July 27, 2016May 15, 2019 In Community Development and Engagement, News, Women's Health and Empowerment
ကချင်ပြည်နယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွင် အသုံးပြုရန် BFM မှ ငွေကျပ်သိန်းတစ်ထောင်လှူဒါန်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် BFM မှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများအနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် ပြင်ဆင်နိုင်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်နိုင်ရေးအတွက် အလှူငွေများကို ပေးအပ်လှူဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။ ဇူလိုင် (၂၆) ရက် (ယနေ့)တွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ့လာပါက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် BFM (ကိုယ်စား) မြစ်ကြီးနားဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ၊ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မာမှ အလှူငွေကျပ် သိန်းတစ်ထောင်ကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒေါက်တာခက်အောင် ထံသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် က သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် အမြော်အမြင်ရှိရှိဖြင့် လှူဒါန်းသော BFM အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် လှူဒါန်းမှုများထဲတွင် အလှူငွေ အများဆုံး စံချိန်တင်လှူဒါန်းမှုဖြစ်ပါကြောင်း၊...
July 27, 2016May 15, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
July 21, 2016May 15, 2019 In Community Development and Engagement, News
June 30, 2016May 15, 2019 In News, Women's Health and Empowerment
ANAR GHET A LINN TAN VILLAGE
To assist more than 360 people affected by the landslides in Mawchi Region, Kayah State in October 2015, the KBZ Brighter Future Myanmar Foundation (BFM) invested K250 million in rebuildinganew village from the ground up. Following the flooding of 12 states and divisions that began in July,...
June 15, 2016May 15, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
BFM granted financial support to twenty-eight local non-profit organizations through Kyaw Thu Parahita Network in order to further carry out social development projects across the country. In assisting these organizations, BFM hopes to increase its impact by extending its network. Prior to this endeavor, BFM had commissioned Kyaw Thu Parahita Network to drill...
Convocation Hall at the Buddhist University in Taunggyi, Shan State donated by the KBZ Brighter Future Myanmar Foundation Myanmar being predominantlyaBuddhist country, BFM puts its resources into sustaining the Buddhist faith and ensuring access to Buddha’s teachings to all his disciples onalong-term basis. Asasupporter of Buddhist doctrine, the foundation...
June 15, 2016May 15, 2019 In Education Enhancement, News
ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အခြေခံ စက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) သင်တန်းဆင်းပွဲ
‘စက်ချုပ်သင်တန်းပေးနေစဉ် သင်တန်းသူတစ်ဦးအား ၎င်းချုပ်လုပ်ထားသည့် အကျီ ၤဖြင့် တွေ့ရစဉ်’ ကမ္ဘောဇ အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် တိုက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဝင်ငွေနည်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် အသေးစား ချေးငွေပံံ့ပိုးမှု (Microfinance) အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၄ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ Microfinance အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ သားသမီးများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်အဖြစ် အခမဲ့ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်းကို အပတ်စဉ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရာ ယခုအခါ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)တွင် သင်တန်းဆင်းဦးရေ (၁၉)ဦးအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့နိုင်ပါသည်။ ‘စက်ချုပ်သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသူတစ်ဦးအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးနေစဉ်’ ‘စက်ချုပ်သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များနှင့် သင်တန်းသူများ သင်တန်းဆင်းပွဲ အမှတ်တရ’ ယခုအခါ ကမ္ဘောဇ အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ တိုက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း အခမဲ့ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရာ...
April 9, 2016May 15, 2019 In News, Women's Health and Empowerment